Israel oo dal Muslim siinaysa gantaalo kul-raadis ah oo casri ah + Muuqaal & Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Israel oo dal Muslim siinaysa gantaalo kul-raadis ah oo casri ah +...
Israel oo dal Muslim siinaysa gantaalo kul-raadis ah oo casri ah + Muuqaal & Sawirro
(Hadalsame) 17 Feb 2022 – Shirkadda Israel Aerospace Industries [IAI] ayaa Morooko siin doonta gantaalka Barak MX oo u shaqeeyo lid-cireed iyo lid-gantaal intaba, iyadoo qandaraas lagula galay lacag dhan $ 500 milyan oo doollar, sida laga soo xigtey InfoDefensa.
Badeecadaha kale ee Israel ee ay Morooko hore uga soo iibsatay waxaa ka mid ahaa daroonnada Heron ee aan duuliyaha lahayn ee Israel, sidoo kale IAI; oo ah Nidaamyada robot-ka ah ee Elbit Systems, iyo qabtayaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay samayso Skylock, sida ku cad macluumaadka ay soo arurisay xarunta ganacsiga Israel ee Globes.
Isla warbaahintu waxay iftiiminaysaa in Barak MX, oo ku shaqeeya ama wax ku arka radaar dhititaal ah, uu yahay xal dabacsan oo qaabaysan oo loo diyaariyey si hawada looga ilaaliyo noocyada kala duwan ee gantaalaha iyo halisaha dayuuradaha aan duuliyaha lahayn. Waa hub awood u leh inuu ku shaqeeyo saddex nooc ee ka mid ah qabtayaasha Barak sida: MRDA, LRAD, iyo ER.
Barak-MRDA waxa uu awood u leeyahay inuu ka hortago gantaalaha masaafo dhan 75 kiiloomitir. Barak-LRAD, ayaa dhankiisa wax ka qaban kara masaafo dhan 70 kiiloomitir, halka Barak-ER-na uu ka masaafo dheer yahay oo waa ilaa 150 kiiloomitir, waana midka la siinayo Morooko oo Tel Aviv la xiratey Diseembar 2020.
Dhowr toddobaad kahor ayaa waxaa soo baxday in Ciidamada Cirka ee Boqortooyada Morooko ay saldhig cusub oo difaaca cirka ah ka sameysteen meel 60 kiloomitir u jirta caasimadda dalkaasi, sida ay sheegtay Infodefensa, kaasoo haatan lagu qalabaynayo agab casri ah oo dhanka daafaca cirka ah.
Tan iyo markii ay Israa’iil dib u soo celisey xiriirka Rabaad wax in yar ka badan sanad kahor, Morooko waxay IAI ka soo iibsatay agab difaac oo ku kacaya dhowr milyan oo doollar, sida ay sheegayaan warbixinno dhammaadkii sanadkii hore. Iibkan cusubina wuxuu ka badan yahay qiimaha qalabkii ay horay uga iibsatay Israel ilaa hadda.
Previous articleDalka Somalia oo kaalin fiican ka galay liis kale oo ceebaysan (Qiimayn Afrika laga sameeyey)
Next articleMaraykanka oo qorshe cusub ka leh Somalia (Kulan culus oo ka dhacay Balli-doogle)